February 2018 – Filimside.net
Tani waa Sunny Leone oo dagaal yahay isku badashay filimkeeda Tamil-ka ah Veeramdevi
February 28, 2018 Zakarie Abdi
Atirishada Sunny Leone waxay u shaqo doonatay Koonfur Hindiya ayadoo haatan duubeyso filim Tamil ah (Kollywood) laguna magacaabo Veeramdevi. Sunny Leone ayaa laga soo bandhigay aragtideeda kowaad ayadoo seef wadato sidoo kalena falaaro dhabarka ugu jiraan […]
Salman Khan inuu SRK la dagaalamo rabin balse rabo inuu Ranveer Singh dhuunta qabto!
Waxaa muuqato in Sedexda Khans marnaba aysan rabin inay xiligaan Boxoffice-ka ku dagalamaan haatana sheekadaas waxaa dib usoo celiyay Mega Star Salman. Warbixin cusub ayaa lagu sheegay in Salman Khan filimkiisa Dabangg 3 duubis lagu […]
Deg deg: filim sameeye Rajkumar Santoshi oo isbitaal loola cararay kadib markii wadnaha laga qabtay!
War deg deg ah oo haatan Mumbai laga helaayo ayaa sheegayo in filim sameeyaha caanka ah Rajkumar Santoshi loola cararay isbitaal kadib markii wadnaha laga qabtay. Filim sameeye Rajkumar Santoshi ayaa hada la dhigay Nanavati Hospital kadib markii xanuun […]
Xog daaha laga qaaday: Sridevi wey xanuun saneyd sidoo kalena daawooyin ayaa u socdeen ka hor inta aysan Dubai aadin!
Atirishada Sridevi cutubkeedii nolosha waa soo idlaaday sidoo kalena ilaa galabta laga gubay saxaafada Hindiya oo dhan xidigtay ayay saacad saacad u hadal heesay. Hadana waxaa muuqato in weli hadal heynta Sridevi soo idlaanin madaama […]
Vivek Oberoi oo laadar ka noqon doono Ram Charan filimkiisa xiga
Atooraja caanka ah Vivek Oberoi ee Bollywood-ka ka tirsan markaan Koonfur Hindiya ayuu sal dhigtay asigoo sanadki hore laadar ku matalay filimkii Vivegam ee Ajith Kumar laadar ka ahaa. Haatana Vivek Oberoi wuxuu saxiixday filim Telugu ah […]
Xasuus Horre: Suniel Shetty iyo Sridevi filim ay shaqo ku bilaabeen balse markii dambe baaqday
Atirishada Sridevi ayadoo 54-jir ah ayay geeriyootay sidoo kalena maanta ayaa la gubay meedkeeda ayagoo ay ka qayb galeen qof walbo oo aan caan ah kana tirsan Bollywood-ka kaasi oo Mumbai ku sugnaa. Hadaba ruug […]
Sridevi qoyskeeda oo qoraal rasmi ah soo saareen waxayna ugu mahad celiyeen qof walbo
Ugu dambeyntii atirishada Sridevi galabta xiliga Hindiya ayaa meedkeeda la gubay sidoo kalena lagu soo kala tagay goobtii lagu gubaayay oo ay dad aad u fara badan isugu imaadeen. Sridevi qoyskeeda ayaa si wadajir ah […]
Maanta Oo Kale Waxaa La Daawaday Filmka Auzaar Iyo Sida Uu Flop Ku Noqday
February 28, 2018 Ali Aadan
Filmka Auzaar waa film dagaal iyo jaceyl saaxiibtinomo isku dhexjirto ah waxaana mashruucan wada jileen oo bandhig cajiib ah kuwada muujiyen xidigaha kala ah Salman khan, Sanjay Kapoor iyo Shilpa Shetty. Maanta oo kale 28 […]
Maxa Tahay Sababta Salman Khan Baraha Bulshada Oga Tacsiyoon Waayey Atirishada Sridevi Ayadoo Lookala Harin Baraha Bulshada Xidigaha Dhamaan!
Mega Star Salman Khan ayaa ugu dambeyn lugta geeyay guriga Anil Kapoor isagoo ka tacsiyoonaya geerida Sridevi ku timid inkasto Sallu soo daahay. Ugu dambeyn Sridevi wax yar kadib waa la gubayaa ayadoo dhamaan la […]
Video Qarsoodi Ah Oo Sridevi Qeybta Gudaha Looga Soo Duubay Iyo Xidigaha Gadaal Ka Yimaden (Sawiro+Video)
Saacada geeska Africa marka Mumbai loo eego hader waa 5:50 PM xili maqribnimo ayeena kusii dhowdahaya walina lama gubin Sridevi. Xidigo badan ayaa gadaal ka imaaden halyeey Bollywood Jeetendra, Rajkumar Hiirani iyo kuwa kale balse […]